Mark Hamill သည် Netflix ၏စကြဝinာစီးရီးမှ Skeletor ကိုအသံထွက်မည် - Netflix မူရင်း
Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi..Luke Skywalker (မာ့ခ်ဟာမီလ်) .. ဓာတ်ပုံ: ဂျွန် Wilson .. © 2017 Lucasfilm, Ltd. All Rights Reserved ။
My Block ရာသီ3တွင်မတ်လ ၂၀၂ တွင် Netflix သို့ရောက်ရှိလာသည် အားလုံးသောလူငယ်များအား ၃ - လွှတ်ပေးသည့်ရက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပျက်မှုများ
Netflix သည်လာမည့်စကြ ၀ ofာစီးရီး၏မာစတာအသံအသံများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကြယ်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
Grayskull ၏စွမ်းအားအားဖြင့် ... Lightsaber ကိုအနိုင်ယူဖို့လား။ လများထင်မြင်ယူဆချက်များအပြီးတွင် Netflix ကမျှော်လင့်ထားသည့်ကာတွန်းကား၏အသံသရုပ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် စကြဝofာ၏သခင် နောက်ဆက်တွဲနှင့်၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ် Star Wars ပရိသတ်များဖြစ်သော Mark Hamill သည်ဒဏ္legာရီပုံပြင်များကိုကစားနေသည်။
Luke Skywalker အပြင်, ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ ကြယ် Lena Headey, Bampy အဆိုပါ Vampire Hunter ကြယ် Michelle Gellar နှင့် အမွေအနှစ်များ Evil-Lyn၊ Teela နှင့် He-Man အမည်ရှိအဓိကဇာတ်သရုပ်ဆောင်ကြယ်ပွင့်ခရစ်ဝုဒ်ကထုတ်လွှင့်မည်ဟုသိရသည် အပတ်စဉ်ဖျော်ဖြေရေး ။
Liam Cunnigham၊ Stephen Root၊ Diedrich Bader၊ Griffin Newman၊ Tiffany Smith၊ Henry Rollins, Alan Oppenheimer၊ Susan Eisenberg၊ Alicia Silverstone၊ Justin Long၊ Jason Mewes၊ Phil LaMarr၊ Harley Quinn Smith ကိုလည်းအသံသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံစာအရသိရသည်
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ tweet ထဲမှာသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္out Checkout:
စကြဝofာ၏သခင်၏သွန်း: ဗျာဒိတ်တော်သည်တန်ခိုးပါ! pic.twitter.com/c2JSMuBSRD
- NX (@NXOnNetflix) ဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2020
အမှု၌သင်တို့ကိုမသိရပါဘူး, စကြဝofာ၏သခင်: ဗျာဒိတ်ကျမ်း 80 ရဲ့ထံမှအထင်ကရဇာတ်ကောင်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ် ဦး ကီဗင်စမစ်စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ် စကြဝofာ၏သခင်, မဖြေရှင်းနိုင်သောနက်နဲသောအရာများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပုံပြင်ပြရန်တိုးချဲ့ခြင်း။
အရ ကီဗင်စမစ် သူ့ကိုယ်သူကာတွန်းကားကန့်သတ်ထားသော Netflix စီးရီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို Eternia သို့ပြန်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး Teela သည်စကြဝuniverseာကိုကယ်တင်ရန်ပျောက်ဆုံးနေသောဓား၏နက်နဲသောအရာကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ သူမရဲ့ရှာပုံတော်ကနှစ်ပေါင်း ၃၅ နှစ်ကြာအောင်ကြံစည်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း ၃၅ နှစ်အတိအကျဖြစ်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်။
Netflix စီးရီးသည်ဂန္တ ၀ င်ကဲ့သို့သောကာတွန်းပုံစံမတူပါ စကြဝofာ၏သခင် , ငါတို့နေဆဲပြပွဲကနေမြင့်မားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်! ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည့်နေ့အထိ Netflix ကသူ He-Man ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ထပ်မံတွေ့ဆုံမည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်ကြောင်းတရားဝင်ကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ။ နောက်တွဲယာဉ်တွင်စကားလုံးမရှိသေးပါ၊ သို့သော်လအနည်းငယ်အတွင်းထွက်ပေါ်လာမည်ဟုခန့်မှန်းနေကြသည်။
သင်ထွက်စစ်ဆေးနေမလား စကြဝofာ၏သခင်: ဗျာဒိတ်ကျမ်း ? အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအသံသရုပ်ဆောင်ကကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်ကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်။
Jane သတို့သမီးကညာရာသီ3စတင်လုပ်ခဲ့တယ်သည့်အခါ
Netflix 2016 အပေါ်ဘေ့စ်ဘောရုပ်ရှင်တွေ